Ahoana ny fomba hiatrehana ny algorithm YouTube manafoana ny atiny? - YTpals
Relevancy + Personalization = Fahombiazana ao amin'ny YouTube
Ny fiatrehana ny algorithm YouTube mavitrika sy henjana dia tsy sakafo ho an'ny mpivarotra. YouTube, izay mankafy mpampiasa mihoatra ny iray 2 lavitrisa, dia ilay koa motera fikarohana faharoa lehibe indrindra mamaly ny filan'ny olona vaovao, satria miroborobo ny haino aman-jery nomerika amin'izao fotoana izao. Noho izany, manome fahafahana lehibe hisarihana ny ho avy ary hanova azy ireo ho mpanjifa tena izy. Fa ny fitarihana ny fandraisana anjara amin'ny YouTube sy ny fifaneraserana amin'ny mpihaino mba hahatratra ny marika malaza dia mitaky anao hanana fahatakarana tsara momba ny algorithm YouTube, izay tarihin'ny fitsipi-pifehezana manokana sy mifandraika.
YouTube dia manana fitsipika filaharana voalamina tsara izay anehoany ny votoatin'ny horonan-tsary mifandraika sy manokana amin'ireo mpampiasa ao anatin'ny fizarana dimy: Home, Fikarohana, Trending, Horonantsary Soso-kevitra, Fampandrenesana ary Famandrihana. Raha azonao atao ny mampifanaraka ny votoatinao amin'ny algorithm YouTube, dia mety hitombo avo roa heny ny fahafahanao hahomby amin'ny sehatry ny varotra video.
Mampifanaraka ny atiny amin'ny algorithm YouTube
Betsaka ny tranga izay nanakanan'ny YouTube ny votoatin'ny horonan-tsary tsy hiseho amin'ireo fizarana ireo satria tsy mifanaraka amin'ny algorithm ao aminy. Raha te hisakanana ny horonan-tsarinao tsy ho voafehin'ny algorithm YouTube ianao dia ireto misy torohevitra haingana vitsivitsy tokony hojerenao.
1. Mamorona votoaty manatsara ny fifaneraserana
Mety ho sarotra ny mitondra ny fidiran'ny YouTube, saingy tsy azonao atao ny misoroka izany raha te ho hita eo amin'ny lampihazo ianao. Ny algorithm YouTube dia momba ny fitondrana votoaty sarobidy, manan-danja ary manokana ho an'ny olona. Azo inoana fa hahazo ny votoaty rehetra izay miteraka fifandraisana sy firotsahana amin'ny mpihaino. Ny famoronana votoaty virtoaly miaraka amin'ny marika sy teny fanalahidy mifandraika dia afaka manampy anao hampitombo ny isan'ny fandraisanao anjara amin'ny YouTube, manome ny YouTube antony hanasongadinana ny atiny manoloana izao tontolo izao. Manome lanja ny fiainan'ny olona ny votoaty mahasarika — zavatra izay tian'ny YouTube ho tratrarina amin'ny alàlan'ny algorithm-ny. Raha manolo-tena amin'ny famoronana votoaty mahasarika sy mampahafantatra ianao, dia azo antoka fa hiseho amin'ny vokatra ara-barotra lehibe ny ezaka ataonao amin'ny varotra video.
2. Amboary ny fantsona YouTube anao mba ho hita maso
Raha te hiseho amin'ny valin'ny fikarohana ao amin'ny YouTube ianao dia mila mampiseho ny algorithm YouTube izay atolotrao izay tadiavin'ny olona. Azonao atao ny mampita izany hevitra izany amin'ny alàlan'ny famaritana ny fantsonao sy ny lohatenin'ny horonan-tsary, izay samy singa manan-danja amin'ny YouTube SEO. Mamorona famariparitana ny fantsona-fehintsoratra iray na roa- amin'ny fampidirana ireo teny fanalahidy mifandraika amin'ny indostria. Ary koa, ny lohatenin'ny atiny horonan-tsary dia tokony tsy mihoatra ny 50 ka hatramin'ny 60 tarehintsoratra ary misy teny fanalahidy. Hanampy ny algorithm YouTube hanara-maso ny fantsonao izany ary hanasongadina izany amin'ny sokajy samihafa. Arakaraky ny fanatsarana kokoa ny fantsonao, no lehibe kokoa ny mety hiseho amin'ny valin'ny fikarohana YouTube. Amin'ny farany, afaka manatsara be ny CTR-nao izany.
3. Tazony ny fandaharam-potoana fandefasana tsy tapaka
Ny marina dia ny algorithm YouTube dia manana safidy amin'ny fantsona mavitrika. Fantsona YouTube matory, izay misy votoaty apetraka tsy misy fandaharam-potoana, matetika tsy tafakatra ambony. Ny sehatra dia mandinika ny isan'ny horonan-tsary ao amin'ny fantsonao sy ny fatran'ny fandefasana azy alohan'ny hampisehoana azy amin'ny mpihaino azy. Noho izany, ny fanalahidin'ny fiatrehana ny algorithm YouTube manafoana ny atiny dia ny mamorona sy mitazona fandaharam-potoana fandefasana. Ny fanaovana izany dia hahatonga anao ho tsy miovaova ary hampitombo ny fahafahanao hahomby. Araho ny angon-drakitra nomen'ny YouTube Analytics mba hamoahana votoaty amin'ny fotoana maha-vitrika indrindra ny mpihaino anao.
Tokony hotadidinao tsara ireo torohevitra voalaza etsy ambony ireo rehefa mamoaka votoaty ao amin'ny YouTube. Tsara ny mahafantatra ny antony mahatonga ny algorithm YouTube hanakana ny votoatin'ny horonan-tsary. Raha afaka mitondra ny firotsahana amin'ny YouTube sy ny fifaneraseran'ny mpihaino amin'ny alàlan'ny atiny ianao dia azo antoka fa hahazo ny traction tianao. Mba hahazoana fifandraisana bebe kokoa amin'ny YouTube dia azonao atao ny mampiasa fitaovana toy ny YTPals, izay afaka manampy anao hanangona mpanjifa YouTube maimaim-poana, tia YouTube maimaim-poana, ary fanehoan-kevitra YouTube maimaim-poana.
Ahoana ny fomba hiatrehana ny algorithm YouTube manafoana ny atiny? avy amin'i YTpals Writers, 14 Aprily 2022
Fomba 3 hanatsarana ny fomba fijerinao ao amin'ny YouTube
Miaraka amin'ny YouTube mitazona hatrany ny toerany ho iray amin'ireo sehatra malaza indrindra amin'ny varotra an-tserasera ankehitriny, dia tsy takona afenina fa ny fampiasana horonan-tsary ho an'ny varotra an-tserasera no tsara indrindra amin'ny orinasa. Amin'ny alàlan'ny «mivoaka…
Fomba 3 hampiroboroboana ny fantsona YouTube anao nefa tsy andoavanao doka
YouTube dia manana mpampiasa mavitrika 1.9 miliara manerantany ary nitombo ho tranonkala faharoa notsidihina. YouTube dia ampiasain'ny mpivarotra dizitaly, influencer, mpandraharaha, gamer, mpanao politika, na iza na iza…
Ahoana ny fomba fanaovana horonan-tsary misy ho an'ireo mpanjifanao YouTube LGBTQIA
YouTube no sehatra be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, izay mahatonga azy io ho mahery vaika amin'ny fampitana hafatra manan-danja. Ny lahatsary ao amin'ny YouTube dia manana hery mamolavola ny kolontsaina sy mitaona ny vahoaka…